श्रीमानले महिनौंसम्म नुहाएनन् भन्दै श्रीमतीले मागिन् सम्बन्ध विच्छेद – ABC NEWS 24
एजेन्सी । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद हुनुको कारण प्राय हामीले सुन्दै आएको विषयमा कि त से’क्स, कि अन्यत्रै सम्बन्ध कायम, कि भने च’रित्रको विषय, या त फेरी आर्थिक कुराको कारोबार । यस्तै यस्तै कुराहरुको विषयमा प्राय श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध टुटेको सुन्न पाईन्छ । तर भारतमा एक श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानले महिनौंसम्म ननुहाएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद मागेकी छन् ।
भारतको मध्य प्रदेश अन्तरगत विदिशाको एक क्षेत्रमा एक दम्पत्तिबीच सरसफाईको विषयलाई लिएर सम्बन्ध विच्छेदको कुरा चरणमा पुगेको छ । पत्नीले पतिले कहिल्यै ननुहाउँने कारण आफुले छाड्न चाहेको एक परामर्श केन्द्रमा दिएको उजुरीमा बताएकी छिन् । उनले पतिलाई सरसफाईको बिल्कुल ख्याल नभएको आ’रोप लगाएकी छिन् ।
ती महिलाले पतिले महिनौसम्म नुहाउँने हुँदा उनको शरीरबाट दुर्गन्ध आउने गरेको बताएकी छिन् । उनले फोहोर आफुलाई मन नपर्ने कारणले पतिलाई नै छाड्न चाहेको उ’जु’री’मा लेखेकी छिन् । उजुरी दर्ता गर्दाको प्रकृयामासम्म आई पुग्नु अघि आफुले श्रीमानलाई धेरै पटक नुहाउन र सरसफाईमा बस्न भनेको तर श्रीमानले नमानेको हुनाले आफुले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको उनले बताईन् ।
अब कुनै पनि हालतमा आफु त्यस्तो फोहोरी श्रीमानसंग बस्न नसक्ने बताएकी छन् । ती महिलाको भनाई अनुसार उनका पतिले आफु पनि फोहोरी हुने र घर पनि फोहोर राख्ने गर्छन् । नुहाउने त धेरै नै टाढाको कुरा दाँतसम्म सफा नराख्ने ती महिलाले उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् । आफुले लगाउने कपडा पनि त्यस्तै फोहोरी राख्ने भएको हुनाले श्रीमानको त्यस्तो फोहोरी बानीले आफु नै रोगी र मानसिक तनावमा पर्दै गएको उनले बताएकी छन् ।
पत्नीको उजुरी पछि काउन्सिलरले पतिलाई सम्झउँदा पतिले अबका दिनमा दिनहुँ नुहाउने र घरपनि सफा राख्ने बचन दिएका छन् । पतिले सधै नुहाउँने बचन दिएपछि काउन्सिलरको अगाडी दुवैजना खुशी भएर सँगै घर फर्केका छन् ।
← बेलायतको प्रधानमन्त्री नै रा’जधानी’कि *** म’हिला क’हा जा’ने ग’रेको खु ला’सा !
टोखामा इन्जिनियर श्रीमतीले श्रीमानको ज्या’न लि’इ’न्, आफुले पनि गरिन् देह त्याग ! →